Tarsiimoo keenya galmaan gahuuf tooftaa fayyadmaneedha: Obbo Lammaa - BBC News Afaan Oromoo
Tarsiimoo keenya galmaan gahuuf tooftaa fayyadmaneedha: Obbo Lammaa
Image copyright OPDO official page
Goodayyaa suuraa Obbo Lammaa Magarsaa, dura ta'aa itti aanaa DHDUO
DHDUOn walgahii miseensota koree gidduu galeessaa 81 wajjin taasiseen Obbo Lammaa Magarsaa gara Ittaanaa dura taa'aatti, Dr. Abiyyi Ahimadiin ammoo dura taa'aa dhabichaa gochuu isaa beeksiseera.
Dubbi Himaan dhaabichaa Obbo Kaasaahun Goonfee sababii barbaachisummaa jijjirama kanaa, ''injifannoo hanga ammaa argame cimee caalaa gahee oggansaa cimaa tabachuu barbaadameeti. Sababii biraa hinqabu,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Akka Obbo Kaasaahunitti jijjiramichi kan taasifame fayyadama ummataa sadarkaawwan garaa garaa irratti cimsuuf yaadamuun kan raawwatameedha.
Koreen jiddugala OPDO murtee kana yeroo dabarsuttis garaa garummaa yaadaa tokko malee sagalee gutuun irratti waliigalamu kan himan Obbo Kaasaahuun, ''kaayyoon keenya inni guddaan eenyuunu morkachuu osoo hintaane of cimusuudha,''jedhaniiru.
Haaluma walfakkaatunis, ibsa Obbo Lamaan Magarsaa, Pireezidaanti Mootummaa Naannoo Oromiyaa OBNiif ibsa kennaniin, murteen akka dhaabaatti murtaa'ee bakki Ministira Muummichaa dhaaba isaanii keessaa ogganaa bakka bu'uun guutamuu kan qabu ta'uusaatti waan amananiif ta'uu addeessaniiru.
Ulaagaalee Ministira Muummee ta'uuf barbaachisan akka hin hanqifneef tarsiimoo akka dhaabaatti murtee fudhatan ta'uus himan.
''Boru ulaagaa ka'u tokko tokkoof kana hin guuttanne, kanatu nu hafe jennee wanti nu qaqqabu akka hin jiraannee taasisuuf karaa guutuu ta'een amumarraa itti qopha'uun nurra jira jenne teenyee mariyannee waliigaluun amantaa guutuudhaan murtee fudhaneedha'' jedhan.
Murtee amma akka dhaabaatti fudhatan tapha kubbaa miilaan kan fakkeesan Obbo Lammaan, dubbiin eenyu iddoo kamirratti yoo taphate caalmaatti bu'aa qaba isa jedhudha jedhu.
Seenaa keessatti aangoo dhufaa jiru kanaaf nama hunda bira fedhiiin jiraatus fedha dhuunfaa caalaa dantaa uummataaf dursa kennuun murtee tarsiimawaa fudhachuu isaanii dubbatan.
''Nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu murteen kun kan fudhatame wanti tokko dhalatee miti, tarsiimoo amma qabanne kana galmaan gahuuf tooftaa fayyadamneedha. kuni siyaas, iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa ammoo tapha baayyeetu jira. Waan uummanni kun barbaaaduufi tarsiimoo kaawwanne galmaan nuu geesisuu danda'a jenne hunda itti fayyadamna '' jedhan Obbo Lammaan.
Gareen gara federaalaa deemuufi kan naannoorratti hafu waliin ta'uun haalli hojjetan irrattis mari'achuu isaanii eeran.
Murtee DHDUO duuba maaltu jira?
Yeroo koreen dhaaba kanaa mariirra tureetti dhaaba gidduutti shirri aangootti dhufuuf xaxamaa jira jedhamee odeefamaa ture.
Qaamoleen murtee koree kanaa keessatti dhiibbaa uuman jiru jedhanii yaadda'aa kan turanis hin dhibne.
Dhimma kana irratti Obbo Lammaan ''as geenyee eenyuunuu sodaannee, ajaja eenyuuniyyu hojjenna jedhanii kana kan yaadu yoo jiraate gowwaadha'' jedhan.
''Asirra gahee ajajamee hojjeta yoo ta'e OPDOn gowwaadha, jaamaadha. Ofiif bada malee saba kana balleesuu hin danda'u, qabsoo saba kanaa dhaamsuu hin danda'u, inumaa akka inni ifee mul'atu taasisuudha kan nurraa eegamu'' jedhan.
Aangoon ministirri muumee nama dhaaba kanarraa dhufuun kan qabatamu akka ta'u abdii qabachuun isaanii ifatti haasa'aa isaanirra kan mula'atu Obbo Lammaan, aangoon gara dhaaba isaanitti dhufu ofeeggannoon ilaalamu qaba jedhaniiru.
''Ammas wanti dhufuuf jiru kuni nagaa fi nagaadhaani jennee fudhachuu hin qabnu. Mee of haalaalan jedhee akka darbannaa kan nutti darbachuu barbaadu jiraachuu danda'a. Nu sakaalee nu kuffisuudhaaf, kunoo fudhatanii dadhaban warra gatii hinqabne nuun jechuudhaaf kan hojjetuufi kan yaadu jiraachuu mala'' jedhan.
Murtee DHDUO'n Dr. Abiyyi gara dura taa'ummaa dhaabaatti fiduuf murteesse xiinxaltoota siyaasaan akkamitti ilaalama jennee hundeessaa fi hoogganaa Opride.com Mahaammad Adamoo dubbifneerra.
''Lammaa gubbaarraa kaasanii gadi buusuun isaanii, Lammaan hojii dadhabee ykn bakki sun isaa hinmaltu jedhanii natti hin fakkaatu. Waarri OPDO carraan kun kan keenya ministira muummee kan ta'uu qabu Oromoodha jedhanii kanatu nu baasa, karaan salphaan isa kana jedhanii Dr. Abiyyin ol baasan'' jedha obbo Mahaammad.
ADWUI keessa morkiin aangoof gadhamu jiraachuu kan dubbatu obbo Mahaammad, keessumaa yeroo kanatti morkiin sun sodaan kan guutameedha jedha.
Bakka obbo Haayilamaariyam Dasaalanyi Ministirri muummee haaraan bu'u yoom akka filatamuu fi kaadhimamtoonni aangoo kanaa biroon eenyu akka ta'an ammaaf wanti beekame hin jiru.
"Jibba Tigiraayi irratti qabdan sirreessaa ykn biyya of dandeesseedha jechuun labsaa,'' Dr Dabratsiyoon